IWatermark Pro emileyo yokuHlala iMihlaba yokuSebenzisa iApp nayo iyasebenza kwiPhoto engaphakathi ukuze ikhuseleke kwaye ikhusele iifoto zakho. | Plum emangalisayo
UMHLA: Septemba 12, 2011
I-iWatermark Pro igqityiwe emva kweminyaka emi-2 yokusebenza iphinde yabhalwa kakhulu kwi-iWatermark yasekuqaleni yeMac. I-iWatermark yeyona Nombolo 1 yokujonga ii-imeyile zeefoto kusetyenziswa iMac, iWindows, i-iPhone / i-iPad kunye ne-Android.
-Udityaniso lwe-iPhoto -Ngoku kuphela kwesicelo se-watermarking sokusebenza ngokuthe ngqo kwi-iPhoto nge-plugin. Yenza ii-watermark kwi-iWatermark uze usebenzise ezo watermark ngqo kwi-iPhoto.
-Sonke isiKhangeli seFoto siyahambelana -Ukongeza ekusebenzeni ngokuthe ngqo kwi-iPhoto ngoku isebenza nazo zonke iibrawuza zeefoto (Lightroom, Aperture, iPhoto, njl.) Njengesicelo esizimeleyo.
- Ngokukhawuleza -Ngoku isebenzisa ukuqhubekeka ngokuhambelana (zonke ii-CPU kunye nee-GPU's) ukukhawulezisa ukujonga enye, amakhulu okanye amawaka eefoto.
- Ukwabelana -Ngoku kukuvumela ukuba uthumele ii-watermark ukuze wabelane ngama-watermark kwezinye iikhomputha zakho okanye kubahlobo kunye nabalingane bakho.
- RAW -Ngoku unokufunda iifayile zeefoto zeRAW kuzo zonke iikhamera zamva nje ukongeza kwiJPG yesiqhelo, iPNG, iTIFF, njl njl.
Imethadatha -Ingoku ifunda kwaye ibhala imethadatha (eyandisiweyo ye-IPTC kunye ne-XMP).
-Iikhowudi ze-QR -Ngoku zinokwenza i-watermark eneekhowudi ze-QR ezifana neekhowudi zebar ezinolwazi oluninzi (i-imeyile, i-url yewebhusayithi, nantoni na oyifunayo).
-I-Creative Commons -Ngoku iqulethe zonke ii-icon ze-Creative Commons / ulwazi ukuze uzisebenzise kwiifoto zokubukela.
-Iziphumo-Iziphumo ezingakumbi ukongeza kwisithunzi, ulwandlalo, ukroliwe, ukuholwa ngoku kubandakanya ukutshiswa kombala, umbala wedodge, oguqukayo kunye nezinye ezininzi.
Amanqaku aManzi amaninzi-Endaweni yento enye ngoku enokongeza ii-watermark (isicatshulwa kunye nemizobo) kwiindawo ezahlukeneyo kwifoto ngaxeshanye.
Iimpawu ezintsha -Iimpawu ezintle kunye nemizobo kwisicelo sonke esenziwe ngumyili owaziwayo wase-Italiya uMichele Zamparo.
- Izinto ezingafaniyo-Izinketho ezintsha zokufomatha. Misela indawo yew watermark ngokutsala kunye nezinye iindlela, ukujonga ngokukhawuleza iplagin, setha imvelaphi kunye nolunye utshintsho oluninzi.
I-iWatermark Pro ye-Mac yenkqubo yesoftware enobuchule bokujonga imifanekiso ebonakalayo kunye neminye imizobo. Ineplagi evumela ukuba isebenze ngqo kwi-iPhoto kodwa ikwasisicelo sodwa esisebenzayo kuzo zonke izikhangeli zefoto (njenge-Aperture, Lightroom, njl. Njl. i-intellectual property. I-iWatermark Pro ye-Mac ilula kwaye kukuphela kwesicelo esibonakalayo esisebenza kwi-Mac, Windows, iPhone / iPad kunye ne-Android.